सुजुकी मोटर कर्पोरेसन जापानबाट निर्मित सुजुकी कार अब नेपाली बजारमा आउने
नेपालका लागि सुजुकी कारको आधिकारिक विक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटोमोटिभ डिभिजन सीजी मोटोकर्पले सुजुकी मोटर कर्पोरेसन (एसएमसी) जापानले उत्पादन गरेका सुजुकी कारहरु नेपाली बजारमा ल्याउने भएको छ ।
हाल नेपालमा मारुती सुजुकी इन्डियाले निर्माण गरेका सुजुकी कारहरु मात्र भित्रिरहेका छन् । एसएमसीका उत्पादन भित्रिएपछि नेपाली ग्राहकले युरोप र उत्तर अमेरिका लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि बनाइएका सुजुकी कारको आनन्द अनुभव गर्न पाइनेछ ।
सीजी मोटोकर्पले एसएमसी जापानबाट हायर सेग्मेन्टका मात्र कार आयात गर्नेछ भने अहिलेको लाइनअपलाई निरन्तरता दिनेछ ।
‘सुजुकीले नेपाली ग्राहकका लागि सबैभन्दा ठूलो रेन्जको कार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । अब हामी सीधै एसएमसी जापानबाट प्रिमियम रेन्जका उत्पादन भित्र्याउने तयारीमा छौं,’ कम्पनीले भनेको छ ।
यो च्यानलमार्फत नेपाली बजारमा भित्रिने पहिलो कार सुजुकी भिटारा हुनेछ । भिटारा युरोपेली बजारमा सबैभन्दा बढी विक्री हुने प्रिमियम एसयुभीमध्ये पर्छ । यसमा फोर व्हील सिस्टम, १.६ लिटरको शक्तिशाली इन्जिन र अन्य अत्याधुनिक फिचर रहनेछन् जसले यो सेग्मेन्टको ‘ड्राइभिङ एक्सपिरियन्स’लाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने कम्पनीको विश्वास रहेकोछ । भीटाराको सुरुवाती मूल्य ७९ लाख ९९ हजार हुनेछ ।
सुजुकी भिटारा कार २०२१ मार्चसम्ममा नेपाल आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । इच्छुक ग्राहकहरुका लागि कम्पनीले प्रिबुकिङ सुरु गरेको छ साथै विशेष अफरको व्यवस्था समेत गरेको छ । यी गाडीहरु सीजी नेक्स्ट् जेन सोरुमहरु बाट उपलब्ध हुनेछन् ।
थप ४ ठाउँमा डिशहोमको फाइबर नेट
दशैंको मुखमा बढ्यो सुनको मूल्य
कैलालीमा नदीमा डुबेर २ बालिकाको ज्यान गयो
दशैंका दश दिन : कति छ धार्मिक महत्त्व ?
प्रधानमन्त्री ओलीले ग्रहण गरे सिकाली देवता खलकको प्रसाद
यी १० वैज्ञानिक चलन : जसलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले चलाएका थिए !
चीनलाई चेतावनी दिँदै भारतले म्यान्मारलाई बाँड्यो पनडुब्बी
सामसुङका कम्पनीका अध्यक्ष ली कुन हीको कसरी भयो निधन ?
मन्दिर नखुलेपछि प्रवेशद्वारमा नै दर्शन गर्दै भक्तजन
विश्वमा कोरोना संक्रमणको भयावह चित्र – अमेरिका र भारतपछि ब्राजिल तेस्रो, रुस चौथो !